Salmo 40 HLGN - Nnwom 40 ASCB
1Mede boasetɔ twɛnee Awurade;
2Ɔyii me firii amena a emu yɛ toro mu,
firii dɔteɛ ne atɛkyɛ mu;
ɔde me nan sii ɔbotan so
na ɔmaa me baabi pa gyinaeɛ.
3Ɔde dwom foforɔ hyɛɛ mʼanom,
ayɛyi dwom a yɛde ma yɛn Onyankopɔn.
Bebree bɛhunu na wɔasuro
ɔde Awurade yɛ nʼahotɔsoɔ,
deɛ ɔmfa nʼani nto ahomasoɔ so,
ne wɔn a wɔmane di anyame huhuo akyi.
5Ao Awurade me Onyankopɔn
woayɛ anwanwadeɛ bebree.
sɛ meka sɛ mereka ne nyinaa ho asɛm a
6Wompɛ afɔrebɔ ne ayɛyɛdeɛ,
woabue mʼaso ama mahunu;
woampɛ ɔhyeɛ afɔdeɛ ne bɔne afɔdeɛ.
7Na mekaa sɛ “Mewɔ ha,
merebɛyɛ deɛ wopɛ sɛ meyɛ, sɛdeɛ wɔatwerɛ afa me ho wɔ Mmara nwoma no mu no.
8Ao me Onyankopɔn, mepɛ sɛ meyɛ wʼapɛdeɛ;
mede wo mmara ahyɛ mʼakoma mu.”
9Meka wo tenenee ho asɛm wɔ dwabɔ kɛseɛ ase;
Ao Awurade, sɛdeɛ wonim no.
10Meremfa wo tenenee ho asɛm nsie mʼakoma mu;
meka wo nokorɛ ne wo nkwagyeɛ ho asɛm.
Mankata wʼadɔeɛ ne wo nokorɛ so
wɔ dwabɔ kɛseɛ no ase.
11Ao Awurade, nyi wʼahummɔborɔ mfiri me so;
ma wʼadɔeɛ ne wo nokorɛ mmɔ me ho ban daa.
mʼamumuyɛ abu afa me so enti menhunu adeɛ bio.
Ɛdɔɔso sene me tiri so nwi,
na mʼakoma aboto wɔ me mu.
13Ao Awurade, ma ɛnsɔ wʼani sɛ wobɛboa me;
Ao Awurade, bra ntɛm bɛboa me.
14Wɔn a wɔpɛ sɛ wɔkum me no nyinaa,
ma wɔn a wɔpɛ sɛ mesɛeɛ no,
wɔmfa aniwuo nsane wɔn akyi.
15Wɔn a wɔka “Ɔtwea! Ɔtwea!” kyerɛ me no,
ma wɔn ho nnwiri wɔn wɔ wɔn ankasa animguaseɛ ho.
ani nnye na wɔnni ahurisie wɔ wo mu;
ma wɔn a wɔdɔ wo nkwagyeɛ no nka daa sɛ,
“Momma Awurade so!”
ma Awurade nnwene me ho.
Wone me ɔboafoɔ ne me gyefoɔ;
Ao me Onyankopɔn, bra ntɛm.
ASCB : Nnwom 40